I-SEO & Ukukhangisa Okuqukethwe & i-ndash; I-Semalt Yabelana Umehluko Okudingeka Ufunde
I-SEO & Ukukhangisa Okuqukethwe & i- - I-Semalt Yabelana Umehluko Okudingeka Ufunde
Kunoma yiliphi ibhizinisi eliku-intanethi, ukumaketha kwe-digital kungakha inhliziyo yenethiwekhi ekhulayo yabaxhasi.Ngokwesibonelo, abathengisi be-intanethi basebenzisa amasu abalulekile afana ne-Search Engine Optimization (SEO) noma Ukukhangisa Okuqukethwe. Nokho,ukwazi umehluko phakathi kwe-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kungenzeka kube lula kakhulu. Kukhona ukufana okuningi phakathi kwalezi zindlela ezimbiliyokulanda amaklayenti ku-intanethi. Ukuze kube okucacile, i-SEO imakethe yokukhangisa ngokuyisisekelo. Ngesikhathi esifanayo, ukumaketha kokuqukethwe kubuye ku-SEO.
Ukunciphisa ukudideka, iMenenja yokuPhumelela kweKhasimende i-Semalt ,ULisa Mitchell, uneloluhlu lwezindlela ezahlukene zokuchaza ubudlelwano phakathi kwe-SEO nokukhangisa kokuqukethwe.
Umehluko phakathi kwe-SEO nokumaketha kokuqukethwe
I-SEO nokukhangisa kokuqukethwe akuvamile ukuhlanganiswa. Kungakhathaliseki ukuthi lezi zingakananiKunezinto ezimbili ezibonakala zihlanganisa, ezinye zezici zazo zithinta. Abathengisi abaningi bokuqukethwe bephutha benza inkolelo yokuthi okuqukethweukumaketha kuqeda isidingo se-SEO. Lo mqondo ungadukisa umuntu futhi ubangele ukuthi usezingeni lewebhu ngokungalungile ngenxa yokungalandeliIzici ezibalulekile ezenzelwe ngamunye wabo.
Lephutha liyabonakala endleleni abantu abahlobene ngayo nezici ezihlukahlukene ezihilelekilengamunye wabo. Ngokwesibonelo, i-SEO isho izindlela zokuthengisa zedijithali njengezihluthulelo ezifanele zokusesha, ukudala okuqukethwe, ezomphakathiukumaketha kwezindaba, ukuxhuma kanye nokuklama iwebhusayithi ngaphezu kweminye imingcele..Ngakolunye uhlangothi, ukumaketha kokuqukethwe kuhilela kuphela ukudala okuqukethwe.Yenye yezindlela ze-Google zokubeka iwebhusayithi, ngokubandakanya izici ezinjengokubaluleka kokuqukethwe, ubude bokuthunyelwe kwebhulogi, i-virtual SMMkanye nezinye izindawo ze-SEO.
Ukuthi ukukhangisa kwe-SEO nokuqukethwe okuqukethwe kuhlobene kanjani
Ukubuka i-SEO nokukhangisa kokuqukethwe njengamabhizinisi ahlukene kungadala okungalungileukubuka kwabo ababili. Okokuqala, i-SEO iyingxenye yokumaketha kokuqukethwe, nakuba kungenakugcwele. Leli qiniso liyabonakala ngenxa yezici ezifanaukubekwa kokuqukethwe, amathegi we-meta nencazelo ye-meta, ukuxhuma kwezokuxhumana kwezenhlalo kanye nokukhethwa kwegama elingukhiye nokuthuthukiswa. Ngakho-ke, ezinye zazolezi zici zithinta, okwenza lezi ezinye izindlela zobuchwepheshe ze-intanethi eziphumelele kakhulu zokuthengisa nge-intanethi kule minyaka eyishumi.
Kuzo zonke izici ze-SEO noma ukumaketha kokuqukethwe, kukhona inqubo yeenye. Ukuze unciphise ukudideka, i-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kuhlukile ngezindlela ezithile. Ngokwesibonelo:
SEO ihlanganisa umthamo omncane uma kuziwa ekudalweni kokuqukethwe nokuthumelakunokumaketha kokuqukethwe. Kuhilela okungaphezulu kwezici zobuchwepheshe zokusebenzisa iwebhusayithi. Ngesikhathi esifanayo, ukumaketha kokuqukethwe kuhilela ukuthuthukisaokuqukethwe, okuzodinga i-SEO ukubonakala kwe-inthanethi.
Ukusebenzisa i-SEO nokukhangisa kokuqukethwe kuhlukile. Isibonelo, i-SEO ishongokuzenzakalela ezinye izici zobuchwepheshe bokukhangisa okuqukethwe. Indlela kuphela yokukhangisa kokuqukethwe okunengqondo kungukusebenzisa noma yikuphiIzindlela ze-SEO.
Noma yikuphi iwebhusayithi e-intanethi yokuphumelela ekunqobeni ukuncintisana kwabo, kokubili i-SEOfuthi ukukhangisa okuqukethwe kufanele kube nakho. Isibonelo, i-SEO inamakhemikhali amaningi kanye nezici zobuchwepheshe okuyinto ukumaketha kokuqukethwe okudingeka kusebenzekahle. Kwezinye izimo, i-SEO incike kokwaziswa okutholakala kuphela ekukhangiseni kokuqukethwe. Ukunquma umehluko nokwaziokuyinto engabalulekile ukuze uphumelele ku-intanethi. Ngenxa yalokho, amasu amabili wokuthengisa ase-intanethi azimele futhi angasiza ukukalaIwebhusayithi ephakeme ezinjini zokusesha Source .